Ungawenza njani umfanekiso kwi-Photoshop, kwi-Illustrator, kwi-Gimp nakwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungawenza njani umfanekiso
Xa siphatha umfanekiso ngeepikseli, ukuyiguqula kunzima kakhulu. Nje ukuba sibunciphise ubungakanani bayo bokuqala, ukubuyela umva ngokwandisa kuya kuba nzima. Kuba igcwele nge-bitmap kwaye ayifundeki kwaye ayinakusebenziseka. Kungenxa yoko le nto ukubonisa umfanekiso kuyimfuneko kwezinye zezi meko. Ukwenza oku, kukho iifomula ezininzi. Ezinye zilula kakhulu kwaye ezinye zinzima ngakumbi, apho unokujongana khona nesiphumo ngendlela othanda ngayo.
Ukuba kwi-intanethi sijonga indlela yokuveza imifanekiso, uninzi lwezifundo ziya kuphuma okanye izifundo zevidiyo ezijongana nayo, kodwa akukho namnye ukunika zonke iindlela onokukhetha kuzo. Kwi-Creativos siyazi ukuba umntu ngamnye unezixhobo kunye nezinto ezinokwenzeka. Kungenxa yoko le nto siza kunika imizekelo eliqela nezixhobo ezahlukeneyo zendlela yokwenza oko. Ukuze ufikelele kuyo nayiphi na kuzo.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungawenza njani umfanekiso ngomfanekiso? Ifotohop? Okanye, mhlawumbi, ngaba kufuneka uyenze kwi-Intanethi? Siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza apha.
1 Ungawenza njani umfanekiso kwiFotohop
2 Ungawuchaza njani umfanekiso kwiAdobe Illustrator
3 Uyifaka njani imifanekiso kwiGimp
4 Ungawenza njani umfanekiso kwi-intanethi
4.2 Ubume beVectormagic
4.3 Ukwenza ubugcisa
5 Vectorize imifanekiso kwiCorel Draw
Ungawenza njani umfanekiso kwiFotohop
Sikhetha umfanekiso omtsha esifuna ukuwenza vectorize. Ngokujonga kuqala iziphumo, kuya kuba lula ngakumbi kuwe ukuba wazi ukuba kusebenza njani ukusebenza nolo luvo. Ke, inyathelo lokuqala esiza kulithatha kukuphinda kabini umaleko. Ukushiya eyokuqala kwaye sisebenze kunye nekopi, kwimeko apho kuya kufuneka sibuyele umva. Eli nyathelo lihlala lisebenza kuzo zonke iiprojekthi ozenzayo.
Soloko uphinda-phinda umaleko osebenzayo. Ukuba senze impazamo sinokubuyela ngqo ngaphandle kokuphulukana nomsebenzi
Masiye kwiFilter> Blur> Blur yaseGaussia. Kuxhomekeke kumgangatho womfanekiso kufuneka siphazamise kancinane okanye kancinci, ke kuya kufuneka ujonge. Zama ukuyenza ibonakale njengomfanekiso olandelayo. Okwangoku, ndibeka amanqaku amathandathu. Eli nqaku liza kuxhomekeka kumgama okanye kufutshane komfanekiso, kwiinkcukacha ezingabonakaliyo.
Kwinqanaba elilandelayo kwaye kolu luhlu sele lufiphele, siya kwimowudi yokudibanisa umfanekiso. Kuyo sibeka 'ukwahlula'.
Ngoku siza kwenza umaleko wokugcwalisa okanye wokuhlengahlengisa inqaku elithi 'Threshold'. Kule nto, siza kongeza ingxolo ukuqaqambisa iinkcukacha zomfanekiso. Ayizukubaluleka ukuba sidibanisa ingxolo eninzi ngasemva, kuba siza kuyisusa. Into ebalulekileyo kukuba iinkcukacha zomfanekiso ziphawulwe kakuhle. Siza kwenza ikopi yamanyathelo ayilwe ngezi ndlela zimfutshane zilandelayo:
IWindows: Ctrl + Alt + Shift + E
IMAC OS: Cmd + Alt + Shift + E
Emva koko siye kukhetho> uluhlu lwemibala. Kumfanekiso wokujonga kuqala kufuneka ucofe kwaye uya kwenza utshintsho. Apho sibeka unyamezelo oluhlala luphakathi kwe-9 kunye ne-20. Sikhetha ukhetho 'lokutyala imali' kwaye ucofe ulungile. Oku ngaphandle kwemfuneko yokunika naluphi na olunye uqwalaselo.
Siza kubona indlela ophawulwe ngayo umfanekiso wethu. Sikhetha isixhobo seLasso kwaye ucofe ekunene kumfanekiso «Yenza indlela yokusebenza». 2 pixel unyamezelo kunye voila. Ukugcina oku siya kuHlela> Chaza imilo yesiko.
Ungawuchaza njani umfanekiso kwiAdobe Illustrator
Kule meko, umbonisi yinkqubo ekhethekileyo yevector. Kuba, ngokungafaniyo ne-Photoshop, isebenza ngqo kunye nabo hayi ngeepikseli. Ke kuya kuba lula kakhulu ukuyicacisa.
Faka umfanekiso kwi-Illustrator kwiFayile> Vula. Xa ufaka umfanekiso wakho kwi-Illustrator, iya kubonakala ikhethiweyo, ukuba akunjalo, cofa kuyo. Ngomfanekiso okhethiweyo, kuya kufuneka ungene kwimenyu yewindow kwaye ufake ukhetho lwe "Image tracing". Emva koko, isixhobo sokuKhangela umfanekiso siya kuvela, apho ungabona khona uthotho lwezinto onokuzilungiselela ngokokuthanda okanye iimfuno zakho.
Okulandelayo, kuya kufuneka useto lwe-Preset, Apho unokukhetha khona ukukhetha uhlobo lomgangatho we vectorization yomfanekiso wakho. Kwakhona eThreshold unokuhlengahlengisa umgangatho ngendlela ebutofotofo, ngokufanayo, kwimowudi yombala, unokukhetha umbala omnyama okanye uB / W.
Ngeli thuba, ungaqhubeka nokukhetha ifoto ye-Hi-Fi ngaphakathi kokuseta kwangaphambili, Ukujonga ngokuzenzekelayo umsebenzi oqala ukwenziwa yifoto yakho. Le nkqubo ingathatha imizuzwana embalwa kuxhomekeke kubungakanani bekhompyuter yakho kunye nokuntsokotha komfanekiso.
Uya kufumana umfanekiso osele usebenza nge-software ye-Illustrator kwaye uye kwibar yombala ngomgangatho wayo. Qwalasela ukunambitha, mfanekiso ngamnye unokwahluka. Ke kuya kufuneka uzame de ukuthanda kwakho. Eli candelo lijongana nomfanekiso kunye nomntu. Emva koko uya kwimenyu 'yeNjongo' kwaye ukhethe 'Yandisa'. Apho uya kuba nomfanekiso wakho oguqulweyo.
Uyifaka njani imifanekiso kwiGimp
Enye yeendlela zokufaka umfanekiso kumfanekiso ngesiqhelo ngesixhobo sepen. Obu bume bunobunkunkqele ngakumbi kwaye bunika iintloko ezininzi. Abanye bathi ukuyenza ngale ndlela kunye nokuyiguqula ibe ngumzobo ayikwenzi vectorizing. Ngayiphi na inkcazo yokwenza ubunyani obunokuba yinyani. Kuba izama ukuguqula umfanekiso ngobukhulu ngaphandle kokuphulukana nomgangatho wawo.
Kwi-Gimp singasebenzisa le fomu kwinto ebizwa ngokuba 'yiDigitize umfanekiso', kodwa akukho meko, xa ukwandisa okanye ukunciphisa umfanekiso uhlala uqinile. Ijongeka ngathi ngumfanekiso omncinci. Isisombululo koku kunokuba kukucuthwa ngesixhobo 'se-Gaussian blur' ukunciphisa ngokukhawuleza ipikseli. Xa siphelelwe kukugxila, sisebenzisa 'uMqobo' ophakathi. I-120/255 ngaphezulu okanye ngaphantsi kwaye iya kuba yinto efana ne-vectorized.
Ukuphucula lo mfanekiso, singaya kwezi zixhobo zilandelayo ze-vectorisation ezikwi-Intanethi. Kwaye ugcine ngefomathi .svg yokusetyenziswa kuso nasiphi na isixhobo.
Ungawenza njani umfanekiso kwi-intanethi
Le yeyona ndlela ilula yokwenza umfanekiso. Kukho amaphepha amaninzi anikezelwe kule nto. Kufuneka ulandele amanyathelo amathathu alula. Kuqala, khetha umfanekiso okhutshelweyo kwikhompyuter yakho kwaye uwufake kwiwebhu. Kuhlala kukho i icon 'yokulayisha'. Lo mfanekiso ngamanye amaxesha unendawo encinci ye-1MB okanye ye-2MB ubukhulu. (Kungenxa yoko le nto ingasoloko iluncedo) Uphawula inkqubo ye-vectorization emva koko ukhuphele kwifomathi ye .svg. Ngale ndlela uza kufumana umfanekiso wakho obonisiweyo. Ayisenayo inzululwazi.
Kolu luhlu lulandelayo siza kukunika ezona zicetyiswayo ukuba uzisebenzise kule fomathi.
Le webhusayithi ayinayo imisebenzi eyongezelelweyo. Njengoko benditshilo kwintshayelelo, lungiselela, ulayishe kwaye ukhuphele. Isilumko.
Ngenye yezona zigqibeleleyo kwaye zinconywa. I-Vectormagic inokhetho oluninzi, njengomgangatho weenkcukacha kunye nemibala. Hlela iziphumo, susa imvelaphi ... phakathi kwabanye.
Kwakhona sinesixhobo esivumela ukuba sisuke kwi-bitmap siye kumfanekiso obonisiweyo kodwa ngaphandle kokuhlonipha imibala. Kuyenzeka ukuba ufikelele kwimifanekiso kwi-intanethi kwaye hayi eyasekhaya kuphela. Ngaphandle koko asiyi kuba nakho ukwenza eminye imisebenzi: nokuba sihlele ulwandlalo, okanye imibala, okanye imvelaphi okanye nantoni na.
Vectorize imifanekiso kwiCorel Draw
I-Corel Draw, kunye ne-vectorization ekwi-Intanethi, sesona sixhobo silula. Ukuba sikhetha umfanekiso njengangaphambili 'Tarantino' kwaye sonyusa eyokuqala, siya kuyibona i-pixelation. Ngoku siza kuyazisa kwiCorel Draw yethu.
Nje ukuba siyifumane, siza 'kwenza i-bitmap' (ukulandelela i-bitmap); 'Uluhlu lwenkcazo' kunye 'nelogo eneenkcukacha' (Logo eneenkcukacha). Kumfanekiso osekhohlo kuya kuvela umfanekiso wokuqala kwaye ngasekunene umfanekiso oboniswe ngeglasi. Apho sinokujonga khona ukuba iipikseli zisuswe njani. Hayi kwakhona. Ewe kunjalo, kukho useto oluphezulu kwiinkcukacha nangakumbi ngokuxhomekeke kumfanekiso. Iinkcukacha, ukuhambisa, iikona, kunye neenkcukacha zombala. Nje ukuba uqiniseke, cofa 'Kulungile'.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ungawenza njani umfanekiso
UAntonio Garcia Rodriguez sitsho
Ewe, kufuneka nditsho into ibenye, eFantasy, ndisebenza neFotohop kunye ne-autocad, okwangoku bendikwiparadigm enemifanekiso kunye nevectorizations, kodwa enkosi kupapasho lwakho ndikwazile ukufikelela usukelo.
Phendula u-Antonio García Rodríguez
Thatha inxaxheba kukhuphiswano lweSlowwalk kwaye uphumelele i-1000 euro